HIV/AIDS ရောဂါ ရှိနေတစ်ဦးမှ လိင်အမြတ်ထုတ်ခြင်းခံရတဲ့ စားပွဲထိုးတဦးရဲ့ မိသားစု ရင်ဖွင့်သံ ဗွီဒီယိုဖိုင် နှင့် အွန်လိုင်းဂယက်များ - TAWTHU
HIV/AIDS ရောဂါ ရှိနေတစ်ဦးမှ လိင်အမြတ်ထုတ်ခြင်းခံရတဲ့ စားပွဲထိုးတဦးရဲ့ မိသားစု ရင်ဖွင့်သံ ဗွီဒီယိုဖိုင် နှင့် အွန်လိုင်းဂယက်များ
လိင်အမြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ စားပွဲထိုးတဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ (ရုပ်/သံ)
ဧရာဝတီ ၊ မတ် ၁၂ ၊ ၂၀၁၈
ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မယ့်လိမ့်လုံစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသားကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း စားပွဲထိုးအမျိုးသားငယ်ကို “အလိုမတူဘဲ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်မှု” နဲ့ မတ်လ ၉ရက်နေ့က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားတဲ့ တရားလို အမျိုးသားငယ်နဲ့ သူ့ မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းကို ဧရာဝတီက မေးမြန်းမှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်ကူး – အဲမလီ၊ ရွှေလေး
တလကို နေစားအငြိမ်း ၈ သောင်းပေးပီး ကိုယ့်မှာ HIV ရှိနေလျက်နဲ့ အပြင်ပန်းမှာ လူမြင်ကွင်းမှာ အနေအစားချောင်အောင် HIV/AIDS ရောဂါသည်တွေအတွက်
အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုပီး အသံကောင်းဟစ် သူများတကာ သားပျို သမီးပျိုကို ပိုက်ဆံ ၄ ၅ထောင်ပေးပီး
ကွန်ဒုံးမသုံးပဲ မဒိန်းကျင့်တဲ့ ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ အောက်တန်းစား အ၆ အကြောင်း လာမေးတာများလို့ အခုလို အလင်းပြလိုက်တယ် .
သူ့နာမည်က Addy Chen(ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရောဂါလိုက်ဖြန့်နေတဲ့ကောင်)
တကယ်တော့ အဲ့ မယ်လိမ့်လုံစားသောက်ဆိုင်က အရင်က spa ပါ
ကျွန်တော်အရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးတယ် 10တန်းအောင်ခါစကပေါ့ ကျွန်တော် Uniလည်းမတက်ခင် ဘာသင်တန်းတွေနဲ့မှလည်းအလုပ်မရှုပ်ခင်က အိမ်မှာနေရတာလည်းပျင်းတယ် အနှိပ်ပညာကိုလည်းတတ်ချင်နေတာနဲ့ အဲ့ spa မှာလူလိုနေတယ်ဆိုတာတွေ့သွားတယ်
အာ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင်း အနှိပ်ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့တယ် အဲ့တုန်းကအချိန်ကို ကျွန်တော်ခုထိမှတ်မိနေသေးတယ် သူ ကျွန်တော့ကို နင်းခိုင်းတယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အဲ့ကောင်လေးနည်းတူ အဓမ္မကျင့်ဖို့ပြုမူလာပါတယ် ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ customer လာတာနဲ့ ကျွန်တော် သူ့လက်က လွတ်ခဲ့ပါတယ်
ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးမှာ မတရားမှုဆိုတာကိုမရှိစေချင်တော့ပါဘူး ဒီအမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများဖက်မှ အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ တောင်းခံလိုပါကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့ဖုန်း 09792831343 ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
Photo credit ပါ
လိငျအမွတျထုတျခံရတဲ့ စားပှဲထိုးတဦးရဲ့ ရငျဖှငျ့သံ (ရုပျ/သံ)
ဧရာဝတီ ၊ မတျ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈
ရနျကုနျမွို့ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ မယျ့လိမျ့လုံစားသောကျဆိုငျပိုငျရှငျ အမြိုးသားကသူ့ရဲ့ဝနျထမျး စားပှဲထိုးအမြိုးသားငယျကို “အလိုမတူဘဲ ဓမ်မတာနဲ့ ဆနျ့ကငျြပွီး အဓမ်မပွုကငျြ့မှု” နဲ့ မတျလ ၉ရကျနကေ့ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ ရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ တိုငျကွားခဲ့တဲ့အတှကျ ဆိုငျပိုငျရှငျကို ဖမျးဆီး စဈဆေးနပေါတယျ။ ဒီဖွဈရပျမှာ အမှုဖှငျ့ တိုငျကွားထားတဲ့ တရားလို အမြိုးသားငယျနဲ့ သူ့ မိတျဆှေ အသိုငျးအဝိုငျးကို ဧရာဝတီက မေးမွနျးမှတျတမျးတငျ ရိုကျကူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ရိုကျကူး – အဲမလီ၊ ရှလေေး
တလကို နစေားအငွိမျး ၈ သောငျးပေးပီး ကိုယျ့မှာ HIV ရှိနလေကျြနဲ့ အပွငျပနျးမှာ လူမွငျကှငျးမှာ အနအေစားခြောငျအောငျ HIV/AIDS ရောဂါသညျတှအေတှကျ
အလုပျလုပျနတေယျဆိုပီး အသံကောငျးဟဈ သူမြားတကာ သားပြို သမီးပြိုကို ပိုကျဆံ ၄ ၅ထောငျပေးပီး
ကှနျဒုံးမသုံးပဲ မဒိနျးကငျြ့တဲ့ ကိုယျခငျြးမစာတဲ့ အောကျတနျးစား အ၆ အကွောငျး လာမေးတာမြားလို့ အခုလို အလငျးပွလိုကျတယျ .
သူ့နာမညျက Addy Chen(ရညျရှယျခကျြရှိရှိရောဂါလိုကျဖွနျ့နတေဲ့ကောငျ)
တကယျတော့ အဲ့ မယျလိမျ့လုံစားသောကျဆိုငျက အရငျက spa ပါ
ကြှနျတျောအရငျကလုပျခဲ့ဖူးတယျ 10တနျးအောငျခါစကပေါ့ ကြှနျတျော Uniလညျးမတကျခငျ ဘာသငျတနျးတှနေဲ့မှလညျးအလုပျမရှုပျခငျက အိမျမှာနရေတာလညျးပငျြးတယျ အနှိပျပညာကိုလညျးတတျခငျြနတောနဲ့ အဲ့ spa မှာလူလိုနတေယျဆိုတာတှသှေ့ားတယျ
အာ့နဲ့ကြှနျတျောအဲ့မှာ အလုပျသှားလုပျရငျး အနှိပျပညာသငျခှငျ့ရခဲ့တယျ အဲ့တုနျးကအခြိနျကို ကြှနျတျောခုထိမှတျမိနသေေးတယျ သူ ကြှနျတော့ကို နငျးခိုငျးတယျ ပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ကိုလညျး အဲ့ကောငျလေးနညျးတူ အဓမ်မကငျြ့ဖို့ပွုမူလာပါတယျ ကံကောငျးထောကျမစှာပဲ customer လာတာနဲ့ ကြှနျတျော သူ့လကျက လှတျခဲ့ပါတယျ
ဒီမိုကရစေီခတျေကွီးမှာ မတရားမှုဆိုတာကိုမရှိစခေငျြတော့ပါဘူး ဒီအမှုအတှကျ သကျဆိုငျရာလူကွီးမြားဖကျမှ အကူအညီ တဈစုံတဈရာ တောငျးခံလိုပါကလညျး ကြှနျတော့ရဲ့ဖုနျး 09792831343 ကိုအခြိနျမရှေးဆကျသှယျနိုငျပါတယျ
အတူနေဦးလေး တီဘီရောဂါ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေသဖြင့် ကလေးငယ်နှစ်ဦးအား ကျောင်းတက်ခွင့်စာသင်ကြားခွင့် ယာယီနားခံရ
mobile banking သုံးသူတိုင်း သိထားစေချင်လို့ ဖတ်မိတာလေး ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
စစ်တွေထောင် နောက်ဆက်တွဲသတင်း.. ရဲအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ လုံခြုံရေးယူထား
စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်သော ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦးရဲ့ လုပ်ရပ်